Ibsa abo | Ummatoota ollaa Oromoo irratti kakaasuun umrii ADWUI ni gabaabsa | OROMSIIS OROMO
Leave a Comment	/ June 14, 2018 June 22, 2021
(Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo Waxabajjii 14, 2018
Mootummaan Itoophiyaa ADWUItiin durfamu har’as akkuma kaleessaa ummatoota ollaa Oromiyaa fi lammiiwwan saboota biroo Oromiyaa keessa jiraatan saba Oromoo irratti kakaasuu fi hidhachiisanii itti duulchisuu bal’inaan itti fufee jira. Weerarri dhihoo kana godina Harargee kallattii, Cinaaqsan, Mi’eessoo fi Godina Baaleetiin Oromiyaa irratti baname kanuma mul’isa. Waraanni Wayyaanee fi Liyyuu Poolis Somaalee Waxabajjii 9, 2018 Affaar keessa kutanii lafoota Oromiyaa kilo meetira 60 ol kessa seenuun ummata nagaa naannoo Mi’eessootti jimlaan fixan.
Akkasumas torbeema dabre keessa magaalaa Oromiyaa Cinaaqsanii fi naannoo ishee weeraranii uummata nagaa hedduu fixan. Kana malees Baale, lafa Oromiyaa, keessa seenanii dubartii Oromoo tokko gara jabinaan qalan. Duula waraanaa kana duuba taa’ee kan hoogganu Jeneraalota ADWUI tahuun mirkanii dha. Hoogganootaa fi Jeneraaloti ADWUI maqaa Liyyuu Poolis jedhuun Somaalota naannoo Somaalee Itoophiyaa fi biyya Somaaliyaa keessaa kaadhimanii, leenjisanii meeshaa lolaa ammayyaa hidhachiisuun ummata Oromoo godinoota Harargee bahaa fi dhihaa, Baale, Gujii fi Boorana irratti duulchisuu erga jalqabanii bubbuleera. Ajjeechaa jumlaa, qabeenya saamuu, uummata qe’ee isaa irraa buqqisuu fi manneetii uummataa gubanii mancaasuudhaan miidhaa kana hin jedhamne uummata Oromoo irraan gahaniiru.
Duulli waraanaa ADWUIn karoorfamee yeroo dheeraadhaaf fuula sanaan deemaa jiru kun naannoolee daangaa Oromiyaa fi Somaalee Itoophiyaa irratti kan dhaabbatu osoo hin taane duula Oromoo fi Oromiyaa guutuu irratti banamee bal’inaan geggeeffamaa jiru dha. Akeeki duula kanaa imaammata ADWUI ta’e jedhee sanyii Oromoo lafa irraa duguuguu, fi daangaa Oromiyaa dhiphisuu fi xiqeessuuf hordofu irraa madda.
Kana malees ADWUI injifannoo warraaqsi biyyoolessaa Oromoo waggoota sadan dabran keessa gonfate of duuba deebisuun gaaffii siyaasaa kan mirga abbaa biyyummaa Oromoo ukkaamsuuf dhidhiitataa jira. ADWUI ta’e jedhee saboota biroo fi uummata Oromoo gidduutti wal shakkii uumee wal dura dhaabuun kufaatii isa mudate irraa dandamachuuf ijibbaata wixxifataa jira. ADWUIn gartuu Somaalotaa akeeka ‘Somaaliyaa Guddittii ijaaruu’ jedhu, kan pirezidantii Somaaliyaa duraanii Ziyadbarree, galmaan gahuuf abjootan wajjin dantaan walitti michoomee dachee Oromiyaa weeraraa jira.
ADWUI imaammata inni hordofuu fi gochaa inni raawwatu oggaa sakatta’amu murni kun diina saba Oromoo qofa osoo hin taane diina Ummatoota Impaayera Itoophiyaa hundaa ti. EPRDF Itoophiyaa keessaa Oromoo fi Oromummaa akka diina tokkoffatti ramadee balleessuuf gochaa hammeenyaa dhuma hin qabne irratti raawwate. Oromoon akka sabaatti kan targetii keessa galee jumlaan hidhame, jumilaan ajjeeffamee fi kumaatamaan biyyaa arihamee fi qabeenyi isaa garmalee saamame bara ADWUI ti yoo jenne dhaadhessuu hin tahu. Uummati Oromoo saamichaa fi cunqursaan walumaa gala roorroon Wayyaanee/ADWUI nu gahe, Wayyaanee/ADWUI nu hin bitu, nu gahe, gatiittii kiyya irraa bu’i jedhee ifatti itti himuun fincila diddaa gabrummaa finiinsee diina jilbeenfachise.
Kanaaf ADWUI ummata Oromoo balleessee baduuf ijibbaata isa dhumaa gochaa jira. Uummatoota olla wajjin walitti diree bu’aa siyaasaa keessaa argachuuf shira dalagaa jira. Silaa akka heera biyyattiitti yoo waldhabbiin bulchiinsa naannoo takkoo fi nannoo biraa gidduutti dhalate gidduu seenee kan furu mootummaa federaalaa ti. Haa tahu malee kuno waggaa tokkoo oliif weera Jeneraalota Wayyaanee fi Liyyuu poolis Somaaleetiin Oromiyaa irratti geggeeffamu bajataa fi qajeelfama Liyyuu Poolis Somaaleef kennee kan Oromiyaa irratti bobbaasaa jiru mootummaa Federaalaa kan ADWUIdhaan durfamu dha.
ADWUIn Somaalota qofa utuu hin taane uummata Hararii fi Oromoo, Oromoo fi Affaar, Oromoo fi Geediyoo, Amaaraa fi Oromoo walitti diruuf sochii bal’aa gochaa jira. Dhiheenya kan uummata Geediyoo fi Oromoota Gujii, Affaarii fi Oromoota Walloo walitti buusuun hanga tokko milkaa’aniiru. Haa tahuu lammiiwwan Amaaraa Oromiyaa keessa jiraatanii fi Oromoo, akkasumas uummata Hararii fi Oromoo walitti buusuuf yaalii isaan taasisan harkatti fashalee jira. Walumaa gala shira isaan uummatoota Somaalee, Affaar, Hararii, Amhaaraa, Gumuz, uummatoota kibbaa fi kan biro uummata Oromoo wajjin wal dhabsiisuuf xaxan bakkoota hedduutti harkatti didamee kisaara siyaasaa caalu keessa isaan galchee jira.
Uummati Oromoos shira ADWUItti erga dammaqee bubbuleera. ADWUI shira inni saboota biro Oromoo irratti kakaasuuf xaxu tokkummaa uummata Oromoo daran jabeessee sirna Wayyaanee/ADWUI hundeen buqqisuuf jabaatee akka socho’u taasise malee bu’aa siyaasaa argamsiiseef hin qabu. Sabaa fi sab-lammooti empaayerattii keessa jiran hedduunis shira ADWUItti dammaqanii jiru. Jaarsoliin Hararii, jaarsolii fi Ugaazoti Somaalee, uummati Amhaaraa fi kan biro uummata Oromoo wajjin wanni wal nu dhabsiisu hin jiru, kan walitti bu’iinsa uummataa uumuuf olii gadi fiigu qondaalota mootummaa ADWUI ti jedhanii ifatti dubbachaa jiru. Akka kanaan ADWUI imammata inni ummatoota qoqqoodee wal dura dhaabuun umrii aangoo isaa dheereffachuuf itti gargaramaa ture amma hunduu irratti dammaqee jira.
Ummatni Oromoo ummatoota empaayera Itoophiyaa keessa jiran keessaa lafa bal’aa fi tarsiimoo irra qubatee jira. Empaayerattii keessaa baayyina uummataanis isa baayyee guddaa dha. Ummatni Oromoo lafa tarsiimoo irra qubachuu isaa qofa utuu hin taane sabaa fi sab-lammoota 40 ol tahan wajjin wal daangessa. Ummatoota ollaa Oromiyaa qubatan malee sab-bicuun Oromiyaa keessa qubatan kan akka Manz, Harari fi Argoobbaa illee ni jiru. Uummatooti Ollaa Oromiyaa hedduun isaanii uummata Oromoo wajjin firummaa fi hidhata seenaa, aadaa, afaanii fi duudhaa waliin qabu. Uummatoti kanneen hanga TPLF/ADWUI dhufee nagaa isaanii booressutti uummata Oromoo waliin nagaan waliin jiraachaa turan.
Addi Bilisummaa Oromoo hariiroon ummata Oromoo fi ummatoota ollaa gidduu jiraachuu qabu hariiroo ollummaa gaarii, hariiroo nagaa, obbolummaa fi wal gargaarsa irratti hundaa’e tahuu qaba jedhee amana. Oromiyaan nagaa qabaachuuf hariiroo gaarii kan wal kabajaa fi walqixxummaa irratti hundaa’e olloota wajjin qaachuun murteessaa dha. Kun imaammata Adda Bilisummaa Oromoo dhaabbataa dha. Addi Bilisummaa Oromoo keessaahuu waldhabbii daangaa fi dheeda irratti ummata Oromo fi Somaalee Itoophiyaa gidduutti dabree dabree mul’taa ture hariiroo dhaabotii bilisummaa Ogaadeen waliin qabu jabeessuun karaa nagaa akka furamu irratti hojjechaa ture.
Ammas akka wal dhabbiin hin babal’anne maanguddoota biyyaa keessaan fi karaa danda’ame hundaan hojjechuu itti fufa. Karaa biraa gartuulee ADWUItti michoomuun Somaliyaa irraas humna dabalatanii Oromiyaa weeraraa jiran adda baasanii dura dhaabbachuuf ummata Oromoo humneessuu fi hidhachiisuun of irraa qolachuu malee falli biraa hin jiru. Ummati Somaalee kana irratti uummata Oromoo bira akka dhabbatu waamicha goona. Humni Liyyuu Poolis Somaalee jedhamu jalqaba kan ijaarameef sochii ummata Somaalee Itoophiyaa ukkaamsuuf akka tahe dagatamuu hin qabu.
Humni seera-dhablee uummata Oromoo fi uummata Somaalee sirna Wayyaanee mormu irratti yakka hojjetu kun meeshaa hidhatee jiru hiikkatee diigamuu fi bittinna’uu qaba. Farra dimokiraasii kan tahe Mootummaan Abbaa-irree kan ADWUIdhaan durfamu qabsoo Ummatootaan buqqa’ee, Bilisummaan Ummatootaa fi ol’aantummaan seeraa mirkanaawee kanneen uummata irratti yakka raawwatan yeroon isaan itti seeraan gaafataman fagoo hin tahu.
Gartuulee fi humnootiin akka Liyyuu Poolis Somaalee kan ADWUI.dhaaf ulee tahanii uummata Oromoo irratti duulanis ADWUI waliin dhabamu. ADWUIn uummatoota ollaa Saba Oromoo irratti kakaasuun umurii bittaa isaa ni gabaabsa malee hin dheeressu.